Eros, isiGrike uThixo weNqweno kunye nokuLuthisa
Unqulo & Umoya Thixo noThixokazikazi
Ngokuqhelekileyo echazwe njengendodana ka- Aphrodite ngumthandi wakhe , u- Eros wayengunkulunkulu waseGrike onqwenela umnqweno wesondo. Enyanisweni, igama elithi erotic livela egameni lakhe. Ufihliwe kuzo zonke iintlobo zothando kunye nokukhanukela, kokubili isondo kunye noqabane, kwaye unqulwa phakathi kwenkcubeko yokuzala ehlonipha i-Eros kunye ne-Aphrodite kunye.
Eros kwi Mythology
Kukho ngathi kukho umbuzo malunga nomzali ka-Eros.
Kwimbali yesiGrike yakudala ibonakaliswa ukuba yindodana ka-Aphrodite, kodwa uHesiod imchaza njengomkhonzi wakhe okanye umlindi. Amanye amabali athi uEros ungumntwana ka-Iris noZephyrus, kunye nemithombo yamandulo, efana no-Aristophanes, uthi uyinzala kaNix no-Erebus, eyayiza kumenza unqulo lobudala ngokwenene.
Ngethuba lexesha lamaRoma, u-Eros waphuma kwi-Cupid, waza waboniswa njengekherubhi ekhuphayo ehlala efana nomfanekiso odumile namhlanje. Ngokuqhelekileyo ubonakaliswe amehlo-ngokuba, emva koko, uthando luyimpumputhe-kwaye ithwele isaphetha, apho atyhobola khona iintolo ezijoliswe kuyo. NjengeNdebe, udlalwa njengonkulunkulu onothando olusulungekileyo ngexesha loSuku lukaValentine , kodwa kwimo yakhe yasekuqaleni, u-Eros wayenomdla wokuthanda nokuthanda.
Imbali yokuqala kunye noNqulo
U-Eros wahlonishwa ngendlela eqhelekileyo kwihlabathi elidala laseGrisi, kodwa kwakukho namatempile athile kunye namacawa azinikezele kunqulo lwakhe, ngokukodwa kwimida yasenzantsi nephakathi.
Umlobi ongumGrike u-Callistratus wachaza umfanekiso we-Eros owabonakala ethempelini eThespeia, indawo yokuqala yokuziwayo neyaziwayo. Isishwankathelo se-Callistratus sinombongo ogqithiseleyo ... kunye nemingcele kwi-erotic.
" I-Eros, umsebenzi kaPraxiteles, yayingu-Eros ngokwakhe, inkwenkwe ebusweni bobutsha ngokuphakama kunye nesaphetha. Ibhontshi yabonisa kuye, kwaye njengokungathi ukubonisa u-Eros njengothixo omkhulu nolawulayo, I-Eros, kuba ayikwazi ukunyamezela ukuba ibhedu kuphela, kodwa yaba ngu-Eros njengokuba wayekho. Ungabonayo ibhedu ukulahlekelwa ubunzima bayo kwaye ube yinto enqabileyo ngokucebileyo kwindlela yokulahla, kwaye ukubeka le ngcaciso ngokufutshane, into ebonisa lilingana nokufezekisa zonke izibophelelo ezabekwe phezu kwayo. ukunyuswa, kuba nangona kwakumiselwe ngokuqinileyo kwi-footestal, yikhohlisa umntu ukuba acinge ukuba unamandla okubhabha ... Njengoko ndandijonga kulo msebenzi wobugcisa, inkolelo yafika kum ukuba uDaidalos wayenokwenza iqela lokudansa ukunyuswa kwaye bekuncede phezu kwegolide, ngelixa i-Praxiteles yayifake konke ukubeka ingqiqo emfanekisweni wakhe we-Eros kwaye yayiphakamise ukuba idibanise umoya ngamaphiko ayo. "U
Njengonkulunkulu wokukhanga kunye nokuthanda, kunye nokuzala , u-Eros wadlala indima enkulu ekudibaneni. Izipho zenziwa kwiitempile zakhe, ngendlela yezityalo kunye neentyantyambo, izitya ezizaliswe ngamafutha angcwele kunye newayini, ubucwebe obuhle kunye nemibingelelo.
U-Eros wayenayo imida emininzi kakhulu xa kubangelwa abantu ukuba bathandane, kwaye wayebhekwa njengomkhuseli wesithandwa ngokwesini kunye nobudlelwane be-hetero.
Unkulunkulu onamaphiko ulawula ngokungenangqumbo emhlabeni wonke kwaye uyamtshisa uJeve [uZeus] ngokwakhe, enxungule ngemililo engavaliyo .Gradivus [Ares], unkulunkulu onamandla, uye waziva loo maqabunga; uthixo [uHephaestus] uziva bebafake Ewe, yena, obeka iitshisi ezitshisayo eziye zaqhuma i-neath Etna eziphakamileyo zivutha yilo mall umlilo njengalokhu. Akunjalo, uApollo, ngokwakhe okhokela ngokuqinisekileyo injongo yakhe imicibisholo evela kwisithintelo, inkwenkwe enenjongo ethe kunye ne-shaft yayo ephaphazelayo, kunye neentlanzi ngeenxa zonke, ezixhaphake ngokufanayo ezulwini nasemhlabeni. "
Imithendeleko kunye neMibhiyozo
Esixekweni saseAthene, u-Eros wahlonishwa ecaleni kwicala le-acropolis kunye neAphrodite, eqala ngekhulu lesihlanu BCE Ngomnyaka weentsuku zonke, umthendeleko wenzeka ukuhlonipha uEros. Emva kwakho konke, intwasahlobo yinkathi yokuzala, ngoko yintoni na ixesha elihle lokubhiyozela unkulunkulu wekhanuko kunye nenkanuko?
I- Erotidia yenzeka ngo-Matshi okanye ngoApreli, kwaye yayisiganeko esigcwele imicimbi yezemidlalo, imidlalo kunye nobugcisa.
Kuyathakazelisa, abaphengululi babonakala bengavumelaniyo nokuba ngaba uEros wayengunkulunkulu osebenza ngokuzimeleyo kwabanye, nokuba ngaba wayesehlala ehambelana no-Aphrodite. Kungenzeka ukuba u-Eros akazange abonakale njengonkulunkulu ozimelayo wobuncwane kunye nokuvelisa, kodwa kunoko nje ngomgangatho wokuzala onqulo luka-Aphrodite.
Unqulo Lwanamhlanje lwe-Eros
Kukho ezinye iinkokheli zamaGrike ezihlonipha u-Eros kunqulo lwabo namhlanje. Iminikelo efanelekileyo ku-Eros ifaka iziqhamo ezifana ne-apula okanye amagilebhisi, okanye iintyatyambo ezimele uthando, ezifana nee roses. Unokuquka kwakhona isaphetha kunye neentolo, okanye iimpawu zazo, kwisibingelelo sakho. Ukuba uhlonipha u-Eros njengonkulunkulu wokuzala, kunokuba ngokuyinkolelo yokukhanga, cinga iimpawu zokuzala ezifana noonogwaja kunye namaqanda .
108 Amagama eNkosi Shiva
Cybele, Mamakazikazikazi waseRoma
Ngubani owayenguThixokazikazi waseYiputa uIsis?
I-10 yeyona nto ibaluleke kakhulu yamaHindu
Imimoya yomhlaba kunye nendawo
Dagon oyiNtloko yamaFilisti yamaFilisti
Umgqweno weNdwendwe oMhloniphekileyo woMtshato
10 Amanqaku Ngee-Utahraptor, uMxhasi Omkhulu Wehlabathi
'Jabulela kwiiHlabathi zeChords'
Indlela yokuphuhlisa iSicwangciso soFundo lwe-Smart GMAT
Yayiyiphi Inkqubo YaseJapane Yokuya kwiNkqubo?
Inkathazo yamaGrike: Aba Athene baphuma phi?
Yintoni Eyona Ntsingiselo?
Isithethe Sansuku zonke: Ukuhamba Ukucamngca
I-Admissions yeekholeji yaseLyndon
Funda ngeNyoka yaseLwandle elonakalisayo
I-Radiocarbon Ukuthandana - Ukuthenjwa kodwa Ukungaqondakali Ukutshata I-Technique
Indlela iNqununu yokuSebenza isebenza ngayo kwiBritishent yeBritish Open Golf Tournament
"Ukufa kweZithengisi": Iprogram yeSishwankathelo kunye nesiKhokelo soFundo
Umthandazo kuSint Blaise
Ngaphandle kweBarley Marley: Ii-CD ezininzi ze-Reggae zakudala
I-French-Preposition Meaning "Ngokuthi"